Air Sénégal dia manamafy ny baikony ho an'ny fiaramanidina Airbus A330neo roa
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Air Sénégal dia manamafy ny baikony ho an'ny fiaramanidina Airbus A330neo roa
Ny fiaramanidina Airbus A330neo dia handray anjara amin'ny fampiroboroboana ny tamba-jotra antonony sy lavitra an'i Air Sénégal.
Air Sénégal, kaompaniam-pirenen'i Sénégal dia nanao sonia baiko hentitra ho an'ny fiaramanidina A330neo roa, ilay kinova vaovao namboarina ho an'ny fiaramanidina feno habakabaka A330 lafo vidy indrindra. Ny baiko dia manaraka avy amin'ny Memorandum of Understanding nosoniavina tamin'ny volana novambra tao amin'ny Dubai Airshow.
Ny fifanarahana dia nosoniavina tany Dakar avy amin'i Philippe Bohn, CEO Air Sénégal ary Fouad Attar, Lehiben'ny Aircraft Africa Airbus Africa Middle East, teo imason'ny filohan'ny Repoblika frantsay, Emmanuel Macron tamin'ny fitsidiham-panjakana tany Senegal, ary Macky Sall, Filohan'ny Repoblikan'i Sénégal.
“Ireo fiaramanidina A330neo ireo dia handray anjara amin'ny fampiroboroboana ny tambajotra antonony sy lava-lava. Zava-dehibe ho antsika ny manomboka ny hetsika ara-barotra ataontsika amin'ny fiaramanidina izay azo itokisana sy ara-toekarena, sady manome fampiononana tsy manam-paharoa ny mpandeha. Ity baiko ity dia mampiseho ny hetahetantsika amin'ity zotram-piaramanidina vaovao ity, ”hoy ny fanambaran'ny Filoha Tale Jeneralin'ny Air Sénégal, Philippe Bohn.
“Faly izahay manisa ny Air Senegal ho mpanjifa vaovao. Ireo A330neo ireo dia ahafahan'ny Air Senegal misitraka tombony amin'ny toekarena tsy azo tohaina ary manome ny mpandeha azy ambaratonga avo amin'ny fampiononana sy traikefa amin'ny dia eo amin'ny tsenany. ” hoy i Fouad Attar Lehiben'ny fiaramanidina fiaramanidina Airbus Africa Middle East.
Nalefa tamin'ny Jolay 2014, ny A330neo no taranaka farany farany ao amin'ny fianakavian'i Airbus malalaka. Izy io dia miorina amin'ny toekarena voaporofo, fahaiza-miasa ary fahatokisana ny fianakavian A330, ary mampihena ny fandanjana solika manodidina ny 25 isan-jaton'ny seza. Ny A330neo dia mandeha amin'ny alàlan'ny maotera Trent 7000 an'ny Rolls-Royce farany ary misy elatra vaovao lehibe kokoa miaraka amin'ny fitaovana wingtip sharklet. Ny kabine koa dia manome ny fampiononana ireo fampitaovana «Airspace» vaovao.
Ny Departemantan'ny Kolontsaina sy ny fizahan-tany dia mankalaza ny volana fanavaozana an'ny UAE
Nosy Pitcairn: Toerana masina mainty any Pasifika ary paradisa ho an'ireo mpizahatany astro